KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Wasiirka Gaashaandhiga oo sheegay ciidamo Boolis ah in la gaynayo Jowhar
Tuesday 11 December 2012 08:55
Wasiirka Gaashaandhiga oo sheegay ciidamo Boolis ah in la gaynayo Jowhar
Muqdisho (KON) - Wasiirka Gaashaandhiga xukuumada Soomaaliya oo markii ugu horaysay tagay magaalada Jowhar markii laga saaray Al-Shabaab ayaa wuxuu ka hadlay xaalada magaaladaasi.
Wasiirka ayaa sheegay in xaalada magaalada Jowhar ay tahay mid wanaagsan isla markaana amaanka magaalada uu yahay mid sugan oo leesku halayn karo.
Wasiirka Cabdixakiin Xaaji Fiqi ayaa sheegay in ciidamo nabad sugid ah la geeyay magaalada Jowhar kuwaasi oo hordhac u ah ciidamo amaanka xaqiijinayo.
Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in magaalada Jowhar lagayn doono ciidamo boolis ah oo ka qaybqaata sugida amaanka magaaladaasi maadaama haatan ay soo gashay gacanta dowlada.
Fiqi ayaa sheegay in qabashadii magaalada Jowhar ay aheyd mid ay ka shaqeeyeen saraakiisha ciidamada dowlada Soomaaliya isagoo xusay in adkeynta amaankana ay iska kaashan doonaan.
Jowhar ayaa iminka waxaa gacanta ku haaya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM inkastoo Shabaab ay ku sugan yihiin deeganada kale ee Gobalkaasi ka tirsan.